Degso: 7,122 La soo dejiyay 983,752 jeer.
Wadarta sawirrada dhammaan qaybaha: 182
Wadarta tirada ku dhufashada dhammaan sawirada: 464
TOP 12: Top lagu qiimeeyo - Ugu Dambeeyay - Ugu Dambeyntii - Ugu Aragti
Waxaa jira 4 qaybood oo ku yaal sawirka
Samee Gallery kuu gaar ah oo Soo gudbi dhammaan sawirradaada la xiriira Duulimaadyada ee Gaarkaaga u gaarka ah si qof walba ugu raaxeysto Waad abuuri kartaa, wax ka beddeli kartaa, soo dejin kartaa oo u kala saari kartaa sida aad rabto. Barxaddaada waa mid aad u adeegsan karto oo ay ku wada arki karaan dhammaan xubnaha, Kaliya xulo Qeybta saxda ah oo ku dar sawirkaaga. Dhammaan soo dejinta waa la dhexdhexaadiyaa sidaad fahmi doontid waa inaan hubinno inay la xiriirto Milatariga ka hor intaan sawirradu ka muuqan dadweynaha guud.
Abuur Gallery kuu gaar ah oo Soo gudbi dhammaan wixii kuu gaarka ah hore3d Screenshots la xiriira Gallery-kaaga gaarka ah si qof walba ugu raaxeysto. Waad abuuri kartaa, wax ka beddeli kartaa, soo dejin kartaa oo u kala saari kartaa sida aad rabto. Barxaddaada waa mid aad u adeegsan karto oo ay ka wada arki karaan dhammaan xubnaha, Dhammaan soo-dejinta ayaa la dhexdhexaadiyaa maadaama aad fahmi doonto waa inaan hubinno inay la xiriirto hore3d kahor shaashadda Screenshots-ka waa la arki karaa guud ahaan dadweynaha.
Microsoft Simulator Flight Simulator
Abuur Gallery kuu gaar ah oo Soo gudbi dhammaan wixii kuu gaarka ah Microsoft dayuuradda duulista Screenshots la xiriira Gallery-kaaga gaarka ah si qof walba ugu raaxeysto. Waad abuuri kartaa, wax ka beddeli kartaa, soo dejin kartaa oo u kala saari kartaa sida aad rabto. Barxaddaada waa mid aad u adeegsan karto oo ay ka wada arki karaan dhammaan xubnaha, Dhammaan soo-dejinta ayaa la dhexdhexaadiyaa maadaama aad fahmi doonto waa inaan hubinno inay la xiriirto Microsoft dayuuradda duulista kuwaas oo ka mid noqon kara MSFS , FSX , FS2004 , FS2002 , FS2000 iyo FS98 kahor shaashadda Screenshots-ka waa la arki karaa guud ahaan dadweynaha.
Abuur Gallery kuu gaar ah oo Soo gudbi dhammaan wixii kuu gaarka ah X-Diyaarad Screenshots la xiriira Gallery-kaaga gaarka ah si qof walba ugu raaxeysto. Waad abuuri kartaa, wax ka beddeli kartaa, soo dejin kartaa oo u kala saari kartaa sida aad rabto. Barxaddaada waa mid aad u adeegsan karto oo ay ka wada arki karaan dhammaan xubnaha, Dhammaan soo-dejinta ayaa la dhexdhexaadiyaa maadaama aad fahmi doonto waa inaan hubinno inay la xiriirto X-Diyaarad kahor shaashadda Screenshots-ka waa la arki karaa guud ahaan dadweynaha.